Tsy mahomby: Microsoft Adcenter Labs ary .NET | Martech Zone
Tsy mahomby: Microsoft Adcenter Labs ary .NET
Alatsinainy, Septambra 8, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manontany tena ny olona hoe maninona aho no tsy mankafy fandaharana ao ASP.NET. Satria isaky ny manao izany aho dia mahazo pejy diso toa izao. Azoko an-tsaina raha toa ny olona tsara Microsoft tsy afaka mamolavola ny rindranasan'izy ireo manokana raha tsy manao azy, ahoana ny fandehako ?! Avy amin'ny faminaniana momba ny Microsoft Adcenter Labs Demographics:
Tags: bill@tuitivegroup.comfamoahana bilaogycinefywidget FacebookfisaoranaWidget twitter
Dingana iray hanamafisana ny famokarana mailaka anao
Sep 9, 2008 amin'ny 9: 22 AM
Tsy azoko… izany dia pejy diso mahazatra. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampiharana (PHP, Ruby, Perl, sns…) Tena azo antoka kokoa izy io satria tsy toy ny PHP, amin'ny alàlan'ny ASP.NET, manafina ny hafatra diso mba tsy ho hitan'izao tontolo izao ary mety ho lasibatra amin'ireo mpijirika ve ny tranokalanao.
Sep 9, 2008 amin'ny 9: 36 AM
Azonao atao ny mahazo pejy fahadisoana amin'ny sehatra rehetra, azo antoka fa Sameer ihany. Ny fitarainako dia ny tranokala MICROSOFT misy lesoka MICROSOFT. Tokony ho menatra izy ireo fa nametraka fampiharana misy lesoka, satria izy ireo no nanoratra ny IIS sy ny ASP.NET.
Sep 11, 2008 amin'ny 9: 43 AM
Azoko izao ny hevitrao. Ianao milaza fa ity tranokala Microsoft manokana ity no tokony homena tsiny.
Eny ary fa marina ny hevitrao, tokony hamboarin'izy ireo ny pejy hadisoany (asa tsy dia lehibe loatra) fa raha ny marina dia mametraka ny tsiny .NET dia tsy azo resahina raha kely indrindra. Izany dia ho toy ny miteny hoe "Tsy tiako ny fandaharana amin'ny PHP satria ny tranonkala PHP dia manana pejy fahadisoana mahazatra" 😛
Sep 11, 2008 amin'ny 11: 43 AM
Tena nihady tany amin'ny Microsoft ihany koa aho, Sameer :). Heveriko fa mahatsiravina ireo pejy lesoka ao amin'ny IIS momba ny ASP.NET! Amin'ny fiteny hafa, ao anatin'izany ny PHP, raha mandeha ny fikirakira hadisoana dia mahazo antsipiriany momba ilay lesoka aho. Toa (amiko) rehefa mizaha toetra amin'ny ASP.NET izay azoko rehetra dia ity zavatra config ity.
Sep 17, 2008 amin'ny 11: 30 AM
Ahh okay izao azoko. Nefa tadidio fa mahatsiravina izany amin'ny famolavolana. Fanahy iniana nafenin'izy ireo ny tena hafatra diso. Izany dia satria tsy tianao ho hitan'izao tontolo izao ny fahalemenao.
Toy izany koa amin'ny ASP.NET, hitanao ny pikantsary anananao? Manampia customErrors = miala fotsiny dia hanome anao ny hafatra diso marina.
Ny infact aza misy plug na milalao modely fikirakirana hadisoana aza azonao antsoina Elmah izay heveriko fa tsara tarehy fotsiny, nanolo-kevitra azy aho hampiasaina any am-piasana sy mahafinaritra. Amin'ity tranga ity dia azonao afenina ireo mpitsidika ny tranokala, saingy ho voasoratra tsara izy io ary mety hapetraka handefasana mailaka aminao isaky ny misy hafatra vaovao miseho. Miresaka mamy 😉
PS tiako PHP koa, fa rehefa avy nampiasa .NET nandritra ny 2 taona tontolo andro dia tena nitombo tao amiko 🙂